Isiprofetho sikaDavid Wilkerson kwi-Corona Pandemic 1986 | Apg29
Ndibona isibetho esiza emhlabeni. kunye nemivalo, iicawa noorhulumente bavalelwe.
Esi sibetho siza kufikela isiXeko saseNew York, kwaye sisothusa isixeko ukuba singazange sothuke.
Ndibona isibetho esiza emhlabeni. kunye nemivalo, iicawa noorhulumente bavalelwe. Esi sibetho siza kufikela isiXeko saseNew York, kwaye sisothusa isixeko ukuba singazange sothuke.
Ukuthuthumbisa kuya kuguqula amakholwa "angathandazi" abe yimithandazo evakalayo kunye nabafundi bebhayibhile abanomdla, kwaye "inguquko" iya kuba sisikhalo senkosi ekhalayo epulpitini.
Apha kuphuma "ukuvuswa kwesithathu" okuya kutshayela kulo lonke elaseMelika nakwihlabathi liphela.
Malunga noDavid Wilkerson UDavid Wilkerson, owazalwa nge-19 kaMeyi ngo-1931 eHammond, eIndiana, wasweleka ngo-Epreli 27, 2011 kufutshane neCuney eCherokee County, eTexas, wayengumvangeli wasemazweni waseMelika.
Eqhutywa lusizi olunzima kunye nomnqweno olula ngaphakathi, awawufumana ngexesha lokuthandaza wedwa ekhayeni lakhe, weza ngo-1958 njengomfundisi oselula eNew York ukuba azosebenza nolutsha olunolwaphulo-mthetho nolusemngciphekweni.
Oku kukhokelele ekusekeni kombutho wehlabathi jikelele wokuba ngumthunywa wevangeli kunye nokuvuselela iziyobisi.
Ukongeza kwinto emelwe emnqamlezweni kunye neeStilettos, waziwa kakhulu ngemiyalezo yakhe eqinisekileyo yesiprofetho kunye nanjengenkokeli yeCawa yeTimes Square eManhattan.
UWilkerson usweleke kwingozi yemoto.
Eli nqaku liza emva kwengcebiso.
V 03, tisdag 19 januari 2021 kl 06:03